Baby Songs - Songs maka Baby ngosi mmịfe
> Resource> Music> Songs maka Baby ngosi mmịfe
Ihe ọ bụla afọ nwa gị bụ na ugbu a, ị ka na-echeta otú gị nwa ewu ele anya dị ka oge mbụ ọ / ọ mụmụrụ ọnụ ọchị, jiri nwayọọ, na-anọdụ elu, guzoro ọtọ, fé Ndewo-Ndewo, rie nri ma were ya / ya nzọụkwụ mbụ? A ntakịrị ajị ajị, eem? Ị ga-echeta ya nke ọma ma ọ bụrụ na ị mere ka afọ mbụ si nwa ngosi mmịfe iji niile nke ndị a "Firsts" photos Bilie soothing, mara mma n'okirikiri na ngosi mmịfe.
Ọ bụ mgbe a ụtọ na-ekiri ndị ngosi mmịfe jupụtara dị oké ọnụ ahịa na-echeta. Ọ bụrụ na usoro nke na-eme ihe ngosi mmịfe adị mfe, o nwere ike ịgbakwunye na obi ụtọ. N'ihu na-eme ihe ngosi mmịfe, i nwere ike nwetara gị nwa "Firsts" foto ọ bụrụ na ị na-achọsi on akada ọ bụla oge nke nwa gị. Ma, ebe ị pụrụ ịchọta nwa ngosi mmịfe songs mfe? Olee otú ị pụrụ ibudata music si weebụsaịtị? Ndien ke akpatre esi mee ka ebube slideshows? Echegbula. Dị nnọọ soro anyị ịchọta ihe ngwọta na-nsogbu nile.
Part 1: The oké ndepụta nke nwa songs maka ngosi mmịfe eme
Part 2: Olee ka slideshows na ebudatara nwa songs
Part 3: Ebe ahụ nwa songs na weebụ
Part 4: Olee otú ibudata nwa songs maka ngosi mmịfe eme
Part 5: Olee na-eme ka slideshows na ebudatara nwa songs
Part 1: The oké ndepụta nke nwa songs maka ngosi mmịfe Ndinam
A bụ ndepụta nke nwa songs na i nwere ike ịhụ oké nwere na-ege.
1. A Baby Ekpere - Kathy Trocolli
Eduzi ka Download mp3 ma ọ bụ video
Kathleen Colleen "Kathy" Troccoli bụ a dịkọrọ ndụ Christian music-agụ egwú, na-ede akwụkwọ, na-ekwu okwu.
2. Baby uehal - Allison Krauss
Alison Maria Krauss bụ ihe American bluegrass-mba na-agụ egwú-songwriter na-akụ egwú. O wee banye music ụlọ ọrụ na uyen, emeri Obodo n'asọmpi site afọ iri na ndekọ maka oge mbụ na iri na anọ.
3. Mara mma Boy-- Celine Dion
Celine Marie Claudette Dion, CC OQ ChLD bụ a Canadian-agụ egwú, songwriter, entrepreneur na mgbe ụfọdụ omee.
Oge gboo Piano Violin
Johannes Brahms bụ a German dere na pianist. Mụrụ na Hamburg n'ime a Lutheran ezinụlọ, Brahms nọrọ ukwuu nke ya ọkachamara ndụ na Vienna, Austria. Na ndụ ya, Brahms ewu ewu na mmetụta ndị bukwanu.
Kenneth Ray "Kenny" Rogers bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter na ndekọ na-emeputa.
6. O nyere m Ị - Siera
Sierra Kay Kusterbeck (mụrụ December 18, 1990), mma mara dị ka Sierra Kay, bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter na nlereanya. Ọ a kasị mara dị ka ụzọ vocalist nke oké nkume mmachi VersaEmerge, nke o sonyeere ke 2007.
7. na nwa m nwaanyị Anya - Martina McBride
Martina Mariea Schiff, mara professionally dị ka Martina McBride, bụ ihe American mba music-agụ egwú, songwriter, na ndekọ na-emeputa. Ọ mara maka ya soprano abụ abụ nso na mba ya pop ihe onwunwe
8. Ka ha Little - Billy Dean
William Harold "Billy" Dean, Jr. bụ ihe American mba music-agụ egwú na songwriter. Billy Dean mbụ nweela mba ntị mgbe na igosi na telivishọn talent mpi Star Search.
9. My Girl - The Ọnwụnwa
Mkpụrụ obi, R & B
The Ọnwụnwa bụ onye American olu ìgwè mara ịga nke ọma ha na Motown Records n'oge 1960 na 1970.
10. Daddy Bụkuonụ Me ụra - BlacktopGYPSY
BlacktopGYPSY bụ otu ìgwè nke artists na nwere tọhapụrụ ọtụtụ songs Daddy Bụkuonụ Me ụra ịbụ otu n'ime ha.
11. The Kasịnụ Discovery - Elton John
Soft nkume, symphonic nkume
Sir Elton Hercules John CBE bụ ihe English dere na-agụ egwú, bụ ndị na-eso ya onwe ya na piano. Ọ na-arụ ọrụ na lyricist Bernie Taupin dị ka ya songwriter onye ebe 1967; ha rụkọrọ ọrụ na ihe karịrị 30 albums ka ụbọchị.
12. The Onyinye Kasịnụ - Steve & Annie Chapman
Annie Chapman, a tara nke ọjọọ unidentified Oghere Usoro egbu egbu Jack na Ripper, bụ onye gburu na mutilated ọtụtụ ndị inyom na Whitechapel ebe London si mbubreyo August ka n'oge November 1888.
13. Siri Little Boys - Gary Allan
Gary Allan Herzberg, mara professionally dị ka Gary Allan, bụ ihe American mba music na-ese.
14. isi n'ala - Jack Johnson
Ndiife nkume, adụ nkume, pop nkume, now nkume
Jack Johnson bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter, egwú, omee, ndekọ na-emeputa, na onye bụbu ọkachamara Surfer. Johnson mara bụ maka ọrụ ya na juu oké nkume na now Genres.
15. M nnọọ n'anya na - ise maka na-alụ ọgụ
Vladimir John Ondrasik III, mara site na ya ogbo aha ise maka na-alụ ọgụ, bụ ihe American-agụ egwú na songwriter. Ọ na-kasị mara maka ya piano dabeere nkume, dị ka Top 40 Hits "Superman", "Isua 100" na "The ilu".
Wondershare TunesGo - Download niile music n'elu free na TunesGo
Nkebi nke 3: Ebe ahụ nwa songs na weebụ
Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị ọzọ nwa song nhọrọ, ebe a bụ ọtụtụ music saịtị na music video saịtị na i nwere ike ịchọ nwa songs. Lee ndepụta nke otú ahụ na saịtị n'okpuru.
Music video saịtị
Pandora bụ nnukwu internet redio na i nwere ike enuba a otutu dị iche iche songs.
YouTube, bụ nnukwu video search engine na weebụ na-enyere gị aka chọta iche iche iche iche nke music videos.
Spotify bụ a music ọrụ na-enyere gị aka chọta ọtụtụ nde songs na-ege ntị online. MTV bụ autority akụ maka vidio egwú, na ị nwere ike mfe ịchọta ihe dị gị mkpa.
Grooveshark bụ a free music ọrụ na ị pụrụ ime ka ihe ndị kasị ịchọta na-akparaghị ókè songs. VEVO nwere otutu music videos na i nwere ike ime ka ọtụtụ n'ime.
iTunes Radio bụ ọhụrụ internet redio ọrụ na i nwere ike iji chọta nwa songs mfe site na iji otu nwa song ị maara ugbua. Yahoo Music bụ ebe ị pụrụ ịchọta tọn music videos iji strimụ online.
Songza nwere ọtụtụ listi ọkpụkpọ maka ọnọdụ dịgasị iche iche na ị nwere ike họrọ na kwa i nwere ike ịhụ na nwa songs ị chọrọ. Vimeo nwekwara a udi nke music na ị pụrụ ịchọta music videos ị chọrọ.
Nkebi nke 4: Olee otú ibudata nwa songs maka ngosi mmịfe Ndinam
Ị nwere ike ịchọta nwa songs si dị iche iche na isi mmalite. Echegbula. N'ebe a, anyị ga-agwa gị otú ibudata nwa songs si music saịtị na music video saịtị karị.
Mmemme mkpa ka ị Download Baby songs si music saịtị-Wondershare Streaming Audio Recorder
1. Download online music si dị iche iche na saịtị na 1: 1 ezi àgwà
2. weghachite song ọmụma na-akpaghị aka
3. Ịtọ oge ibudata na iyo si mgbasa ozi
Olee otú iji Wondershare SAR ibudata nwa songs si music saịtị
Download a omume na-awụnyere na kọmputa gị na mgbe ahụ ẹkedori ya iji nweta njikere.
Nzọụkwụ 2. Malite ibudata music
Pịa Record button n'elu n'akụkụ aka ekpe nke isi window na-aga music saịtị na-egwu nwa songs ị na-ahụ. Mgbe music amalite na-akpọ, programmụ a ga idekọ ya ịzọpụta gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 3. agafeta music ka iTunes
Gaa Library ịchọta songs i dere. Ọ bụrụ na ị chọrọ agafeta music ka iTunes, ị nwere ike họrọ song na pịa Tinye ka iTunes bọtịnụ na ala. Ọ bụ naanị na mfe.
Mmemme mkpa ka ị Download Baby songs si music video saịtị-Wondershare AllMyTube
1. Download music vidiyo si na saịtị dị ka YouTube, VEVO, MTV na ọtụtụ ndị ọzọ
2. wepụ MP3 faịlụ site na video faịlụ
3. Task scheduler, video ọkpụkpọ na njikwa
Olee otú iji Wondershare AllMyTube ibudata nwa songs si music video saịtị
Download a usoro awụnyere na kọmputa gị. Cheta na-ahọrọ nri version. Mgbe ị na-emeghe ya, ị ga-ahụ a dị ọcha window dị ka e gosiri na nri.
Nzọụkwụ 2. Download videos
Gaa video saịtị na-egwu nwa songs ị na-ahụ na ị ga-ahụ a Download button sere n'elu na n'elu nri. Pịa bọtịnụ na-amalite nbudata na video. I nwekwara ike iṅomi URL nke video na pịa Paste URL bọtịnụ na isi window nke usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 3. tọghata videos ka MP3
Gaa Finished n'ọbá akwụkwọ ịchọta video na pịa tọghata bọtịnụ na nri. Wee họrọ MP3 na mmepụta Format window. Pịa OK na-amalite converting.
Part 5: Olee otú ime ka ngosi mmịfe na ebudatara nwa songs
Mgbe nwa ọhụrụ ahụ songs maka ngosi mmịfe na-ebudatara, i nwere ike iji ha na-eme ka slideshows ọnụ gị na foto na vidiyo.
Mmemme gị mkpa-Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe
1. Tinye dị ọtụtụ dị ka photos, videos na songs na-eme ka ihe ngosi mmịfe
2. Hazie ngosi mmịfe na oké nkiri ekwekọghị
3. I nwere ike iduzi ịkekọrịta ngosi mmịfe ka YouTube
Olee otú iji Wondershare DSB ka slideshows na nwa songs
Nzọụkwụ 1. Tinye foto ma ọ bụ vidiyo ka usoro ihe omume
Pịa Tinye Files mbubata foto ma ọ bụ vidiyo banyere nwa gị ka usoro ihe omume.
Nzọụkwụ 2. Tinye nwa songs na foto ngosi mmịfe
Gaa na hazie taabụ pịa Music toolbar na mgbe ahụ ị nwere ike itinye ndabere music. Ma ọ bụ i nwere ike n'ụzọ kwụ ọtọ ịdọrọ nwa songs ka music track. Mgbe ahụ, ị nwere ike itinye ndị ọzọ ụzọ maka ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 3. Save ngosi mmịfe na ndabere music
Gaa Asuanetop taabụ iji na-enweta ihe ngosi mmịfe azọpụta. Ị nwere ike ọkụ ka DVD, azoputa ozugbo na kọmputa ma ọ bụ ọbụna ịkọrọ ka YouTube.